Shaqaale ka tirsanaa hey,ada Bisha Cas oo lagu dilay dalka Yemen | Universal Somali TV
Shaqaale ka tirsanaa hey,ada Bisha Cas oo lagu dilay dalka Yemen
Dowlada Imaaraadka Carabta ayaa canbaareysay falkii Jimcihii shalay lagu dilay laba ka mid ah shaqaalaha hey,ada bisha cas ee dalkaasi oo ka howlgalayay magaalada Caden ee dalka Yemen.
Hey,ada bisha cas ayaa dhanka kale sheegtay in dilka shaqaalaheeda uu yimid kadib markii dabley aan la garaneyn heybtooda ay Afduubteen.
War saxaafadeedka ka soo baxay hey,ada ayaa lagu canbaareeyay dilka Axmed Fu,aad Al-Yuusufi oo ahaa isku duwaha arimaha gargaarka ee hey,ada bisha cas ee Imaaraadka u qaabilsanaa magaalada Cadan iyo Maxamed Taariq oo ay isla Shaqeynayeen.
Wasaarada arimaha Dibada xukuumada Imaaraadka ayaa dhanka kale tacsi u dirtay ehelada iyo saaxiibada muwaadiniinteeda lagu dilay dalka Yemen.
Hey,ada bisha Cas ayaa falkaan ku tilmaantay mid ka dhan ah xuquuqda aadanaha kana hor imaanaya xeerka caalamiga iyo tan diimaha oo ah in aan la dili karin dadka rayidka gaar ahaan kuwa howlan arimaha Gargaarka.
Ilaa iyo hada ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas,uuliyada dilkaan, balse waxaa lagu tuhmayaa maleeshiyaadka shiicaada ee ku sugan dalka Yemen ee dagaalka kula jira ciidanka Imaaraadka ee ku sugan dalka Yemen.
Kan-xigaIsraa&#039;iil oo xaqiijisay in ay ko...
Kan-horeMuwaadiniin Soomaaliyeed oo looga sha...
55,186,769 unique visits